Baaris qoto-dheer oo lagu bilaabay Gaari maanta isku qarxiyey is-goyska Sanca ee xamar (Dhegeyso) – Radio Daljir
Luulyo 27, 2013 4:30 b 0
Muqdisho, July 27, 2013 – Barqanimadii maanta waxaa qarax khasaare badan dhaliyey uu ka dhacay is-goyska Sanca ee magaalada Muqdisho, Qaraxaas oo lagu fuliyey baabuur laga soo buuxiyey aaladaha qarxa, kaas oo ku bas beelay bartamaha Is-goyska.
Waxaa la soo sheegayaa geerida 1 ruux oo ah qofka gaariga saarnaa, iyo ?dhaawac 4 kale oo wax ku noqday Qaraxa ka dhacay Is-gowska Sanca, halkaas oo ah meel kala qeybisa degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshiid ee Magaalada Muqdisho.
Goob-jooge ku sugan is-goyska Sanca ayaa radio Daljir u xaqiijiyey in baabuurka qarxay uu ahaa nooca raaxada, wuxuu sheegay qofkaasi oo aan magaciisa shaacin in khasaare dhaawac uu ka dhashay inta uu arkay.
Masuuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa goobta soo gaaray kadib markuu Qaraxu dhacay, Gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Muxyadiin Jurus oo goobta kula hadlay saxaafada, wuxuu sheegay in ay arkeen khasaaraha goobta ka dhacay oo uu ku jiro meydka qofkii gaariga waday.
Gudoomiyaha degmada Kaaran Cali Calasow ayaa isna saxaafada ladlay wuxuuna sheegay in ay baaris dheer ku ?samayn doonaan Gaarigaasi, iyadoo haatan ay soo baxayaan warar sheegaya in Gaariga qarxay laga leeyahay wasaarada howlaha guud iyo gaadiidka ee dowladda Soomaaliya.
Dhegeyso war-bixin uu diyaariyey weriyaha daljir ee muqdisho Cabdulaahi Suldaan
Al-shabaab oo ku baaqay dagaal wejiyo cusub leh oo ka dhan ah howgalka ka socda dalka Soomaaliya